Sida Loo Cabiro Guusha Baraha Bulshada | Martech Zone
Arbacada, Oktoobar 7, 2015 Douglas Karr
Cabbiraadda guusha baraha bulshada ayaa ka adag inta badan dadku aaminsan yihiin. Warbaahinta bulshada waxay leedahay saddex cabbir:
Toosinta tooska ah - waa halkaan inta badan suuqleydu ay raadinayaan inay cabiraan soo noqoshada maalgashiga. Xidhiidhku wuxuu si toos ah uga keenaa booqdaha barta warbaahinta bulshada ama la wadaago beddelaad. Si kastaba ha noqotee, ma aaminsani inay taasi tahay halka ugu badan ee ROI ay ku taal.
Saameynta Is-beddelka Haysashada beel ay khusayso oo ereygaaga sidata waa mid aad u xoog badan. Waxaan soo diri karaa wax ku saabsan wax soo saar ama adeeg, adeeggaas waxaa wadaagaya dhagaystayaasheena, ka dibna qof ka tirsan shabakadda dhagaystayaasha ayaa dhagsanaya oo beddelaya. Waxaan rumeysanahay inay tani ka saameyn weyn tahay beddelka tooska ah (in kasta oo aanan hayn xog aan ku xoojiyo intaas).
Hawl-wadeenada - waqti ka dib, dhisida dhagaystayaal iyo bulsho loogu talagalay warbaahinta bulshada ayaa wacyigelin, amar, iyo kalsooni leh. Aaminaadu aakhirka waxay horseedaa sicir beddelaad sare. Beddelaaddani ma noqon karaan kuwo si toos ah loogu sababayn karo cusboonaysiinta warbaahinta bulshada ama wadaag. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqda ah in nuxurkaagu yahay la wadaago iyo waxaaga soo socdaa waxay sii kordhayaan labadaba saamaynta aad kuheleyso iyo awooda aad kubixin karto.
Tani faahfaahinta ka timid Salesforce waxay qabataa shaqo aad ufiican oo eegaysa saameynta warbaahinta bulshada guud ahaan. Xaqiiqdu waxay tahay in dhammaan faa iidooyinka warbaahinta bulshada aysan ka dhalan doonin macaamil badan, baraha bulshada ayaa sidoo kale saameyn ku leh awoodda kor u qaadista iyo haysashada macaamiishaada.
Waxaad haysataa cabirro kooban oo aad tixgelinayso markaad go'aamineyso guusha ololahaaga. Marka ay timaado falanqaynta xogta laga helo qoraaladaada, fariimahaaga, iyo sheekaysigaaga, waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelato inaad ka turjunto xogta shabakad kasta oo warbaahinta bulshada ah. Si aad u cabirto guulahaaga bulsheed iyo qulqulkaaga, oo aad u sameyso degel kasta oo baraha bulshada ah mid fudud oo la falanqeyn karo, tixgeli adeegsiga ilaha saddexaad.
Iyada oo maskaxda lagu hayo, waxqabadka warbaahinta bulshada ayaa badanaa ah taasoo keentay tilmaame guusha istiraatiijiyadda hawlgelintaada. Soo noqoshada maalgashiga way sii kordheysaa markii aad sii kordhiso gaadhitaankaaga iyo maamulkaaga, marka yoolalkaagu waxay u baahan doonaan si isdaba joog ah. Infographic-kaani wuxuu shaqeeyaa shaqo weyn oo ah bixinta cabbiraadaha aad ku fiirsan karto iyada oo loo marayo barnaamij kasta oo warbaahinta bulshada ah.
Waxaan sii wadeynaa inaan kor u qaadno saameynta istiraatiijiyadeena warbaahinta bulshada anagoo la shaqeyneyna kuwa wax saameyn leh, daaweynaya lana wadaagaya waxyaabo aan caadi aheyn oo qiimo u leh dhagaystayaasheena, iyo inaan kor u qaadno waxyaabahayaga iyo waxyaabaha aan si toos ah ugu fidino. Hadafkeenu maahan iibiyo, waa inay bixiso qiimo aad u tiro badan oo adiga - kuwa raacsan - aadan rabin inaad ka tagto oo aad sii wadato wadaagista waxa aan wadaagno.
Xusuusnow - diiradda saar isbeddellada cabbirkaaga, ha u fiirsan qodobbada xogta degdegga ah! Kobaca saameynta warbaahinta bulshada ayaa fure u ah guushaada.
Tags: hababka ugu wanaagsancabirka facebooksida loo cabiro baraha bulshadaqiyaaso ku xiranyoolal caqli badanwarbaahinta bulshadayoolalka warbaahinta bulshadacabirka warbaahinta bulshadacabbiraadaha warbaahinta bulshadacabirrada twitter-ka
Oktoobar 8, 2015 at 12:44 PM
Farriin weyn! Had iyo jeer waxaan dhahaa iibka iyo u-yeelashadu waa 2 ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee bulshada ROI. Faahfaahin muuqaal ah inkasta oo aad sax tahay.
Oktoobar 13, 2015 at 4:37 AM
Haa warbaahinta bulshada waa mid aad u awood badan hadii aan si sax ah u isticmaalno laakiin cabirka guushu waa mid aad u adag, halkan maqaalkan / infographic si cad ayaa loogu xusay sida loo cabiro natiijooyinka warbaahinta bulshada, badalida saameynta ayaa ah mid aad muhiim u ah fi waxaan dooneynaa guul mustaqbalkeena.
Aad baad ugu mahadsantahay wadaagida macluumaadka, goor dhow is arag.